Chelsea ayaa garaacday Atletico Madrid lugtii hore ee wareega 16ka Champions League ee ka dhacday Bucharest, Romania.
Gool qurux badan oo uu dhaliyay qeybtii dambe ee Olivier Giroud ayaa Chelsea u siiyay kooxda reer Spain inay hoy ku meel gaar ah ka dhigato Bucharest sababo la xiriira xannibaadda loo saaray Korona Fayras.
Markii la ciyaaray 68 daqiiqo, Giroud’s Jan Oblak ayaa u dhawaaday inuu hogaanka u dheereeyo, laakiin darbadiisa bidix ayaa soo eegay dhanka sare ee baarka si uu shabaqa gadaashiisa ugu dhaco.
Laakiin VAR, oo fiirisay goolka laba daqiiqo, ayaa goor dambe ansixiyay, maxaa yeelay daafaca Atletico Madrid Mario Hermoso ayaa kubad u dhigay Giroud si uu u dhiibo. Markii ay kubaddu mar uun ka timid xiddig Atletico Madrid ah, Giroud ma ahayn offside goolkiina wuu saxnaa.
Sababta VAR ay u qaadatay waqti dheer in ay ku ansixiso goolka ayaa ahayd in la hubiyo in Hermosa uu damacsanaa in uu taabto kubbada isla markaana ay si shil ah u dhacday. Waxay ku heshiiyeen inuu si ula kac ah u taabtay kubbada markuu doonayay inuu bixiyo, taas oo keentay in Giroud uu laad xor ah soo tuuro.
Si la mid ah sida ay Chelsea u dhalisay, Man City ayaa sameysay kulan Premier League ah oo ay la ciyaartay Aston Villa markii Rodri, oo offside ku jiray, uu baas ka helay Aston Villa’s Mings oo u dhaliyay Bernando Silva.
Civil society anger over abuse of